Umshini wokuthunga "seagull". Ukulungiswa ekhaya
Phakathi eSoviet nemishini yokuthunga kukhona amadivaysi ethandwa kakhulu akhiqizwa Podolsk, ezikulesi simila lokukhanda. umshini wokuthunga "seagull" - umsizi ozithandayo amakhosi ethu. Akumangalisi ukuthi uye wathola trust. Le divayisi okuthembekile nokulula isebenze. Ingabe oqinile aluminium izindlu, "kuthatha" yimuphi izicubu nesingakhangi ukusebenza.
umshini wokuthunga ngoba "We-seagull." ukuqeda umonakalo
umshini wokuthunga "seagull" ongakhonza umnikazi walo amashumi eminyaka. Into esemqoka - ngendlela esifike ngesikhathi ukukhokhela umonakalo, ukuze bakwazi uziqede futhi ngezikhathi ezithile gcoba izindlela. amadivaysi Umumo ubanzi ngokwanele; kungumnikelo umshini wokuthunga "seagull" -134, 132, 132 M, 142 M, 143 kanye nabanye. Naphezu kokuhlukahluka zinhlobo, ukulungisa eyenziwa cishe zonke izinhlobo okufanayo.
ukuhluleka olungenzeka "We-seagull", nokuthi ukuzixazulula
1. kudivayisi kuhlulekile yaseZimbabwe. Ukuxazulula lenkinga, hlola isimo yenaliti - kumele kube flat hhayi insaliwe. Hlola inaliti kufanele kube ngaphambi kokuqala umsebenzi, ngazizwa isandla sakhe. Esimeni semfene kufanele indawo entsha. Kumele kukhunjulwe ukuthi kuphela isebenzisa inaliti, okuyinto kuhambisana ngalokufanele imodeli ethile umshini wokuthunga. Isinyathelo esilandelayo ukuhlola ukuthi inalidi engena ipuleti, esemgwaqweni ngaphansi ngakwesokudla. Buyela inaliti endaweni kungenzeka usebenzisa shift Uhlaka kwebha inaliti. Esinye isizathu sokuba ukweqa imigqa - ukubekwa engafanele Shuttle engozini ngenaliti. Uma isethwe ngokungalungile ke lo msebenzi uyokwenziwa lushelele by ngaphandle kokuthola kumjikelezo. Ukuze ulungise le nkinga, ulungise Shuttle.
2. Nakuba umugqa inaliti eziphukile. Lokhu kwenzeka ngenxa yendawo engafanele Isigaxa slide. Ukuze afeze umshini ukulungiswa lokuthunga "seagull", kubalulekile ukususa plywood eceleni kwedivayisi. Ngakwesokunxele is a indlela Shuttle, lapho ukuthutha luyatholakala. Kuyadingeka ukuba ukuyikhulula kusukela isiqhebezo, futhi vula handwheel. Acute ukuthutha engenhla ukuba kancane ngenhla kweso inaliti balandela eduze kwakhe. Ukuze ukuma lesifanele kuyadingeka ukuze uyasikrufulula ngezikulufo ezimbili ku-eksisi ukuthutha ujikeleza, futhi ngobumnene ibenze yona inaliti.
3. ukukhubazeka Stitch umugqa. Ukuthunga umshini "seagull" kungase kube emsebenzini ukunikeza yezinhlamvu ababuthakathaka noma unganyakazi. Ezilawulwayo ne ngentambo isikulufa. Ngenxa yale njongo kubalulekile qinisa noma athambise ngokuvula ke ngokwewashi noma okuphambene nalokho. Uma lokhu kungasebenzi, ke kubalulekile ukususa plate ukuthi unamathele nge ngezikulufo, futhi bend kancane ngaphakathi. Okunye izimbangela angase abe mpofu Stitch zokugwema ukuphuka ngentambo eliphezulu ukungezwani Umlawuli noma twist ongaphakeme nut. Ukuxazulula lenkinga, kuzomele uvule isivalo eduze ikhanda bese udonsa Gadget.
4. Lapho eqhuba zokugwema ukuphuka umshini ngentambo kwenzeka. Udinga ukuhlola plate inaliti: kungashiwo zikhubazekile ukuba punctures futhi engalingani. Ukuthutha nalo burrs. Kukhishwe yonke umshado ngokuzisiza ukugaya nge lokukhuhla.
Ukuthunga umshini "seagull" ezimweni eziningi, lilungiswe ekhaya, kodwa uma umonakalo sisibi, kufanele bafune usizo okuyinhloko.
Wezingane umshini-idiphozi ibhokisi - ithoyizi namaloli encane
Indlela ukutshala ngembazo ngembazo ukuphatha ngokwakho?
Hat "Owl" - zikanokusho yokuqala kwentsha umnqwazo
Izingane ukugeza powder: izikalo, ukubuyekezwa, amanani
Hermes imikhiqizo: izikhwama. Ama ifotho, amamodeli Izibuyekezo
Sampo - entabeni e Karelia
Word - wukuthi uhlelo? izici eziyisisekelo futhi undocumented
Februwari amaholide e-Russia. Februwari-Orthodox amaholide
Offroad Tuning UAZ "isinkwa"
David Tua - boxer sosondonzima eSamoa, biography lokulwa
Plasmapheresis - a ... Cascade plasmapheresis. ulwelwesi plasmapheresis
Yezimila nezilwane ezihlukahlukene zonke eChibini iBaikal
3 iPhone izici uzongithanda zonke photographer
Indlela yokubona i-Varyag rocket cruiser olwandle
Kungani ama-bacterium ahlukanisa semajukujukwini embusweni ekhethekile lokuphila ngemvelo?
Ophahleni Kumisiwe nge isithombe: enhle, enakho, kwenta